Qadar oo dacwad ka gudbisay diyaaradaha dagaalka Imaaraadka oo galay hawadeeda – warqaat.com Information About Somali New's Today
HomeWARARKA MAANTAQadar oo dacwad ka gudbisay diyaaradaha dagaalka Imaaraadka oo galay hawadeeda
Dowladda Qadar ayaa cabasho rasmi ah u gudbisay Golaha amaanka ee Qaramada Midoobey kaddib markii mid ka mid ah diyaaradaha dagaalka dowladda Imaaraadka Carabta ay gashay hawada dalka Qadar oo ay ku jirtay muddo hal daqiiqo ah.
Danjiradda Dowladda Qadar u fadhida Qaramada Midoobey Caaliya Axmed Bin Sayf Al-Thani ayaa Golaha amaanka ee Qaramada Midoobey ka sheegtay in diyaaradda dagaalka Imaaraadka ay 21kii December 2017 gashay Hawada dalka Qadar iyada oo ku haadday masaafo hawada Qadar ka sarreysa 33,000 oo fiit.
Dowladda Qadar waxaa ay ku hanjabtay in haddii uu soo laabto gefka ka dhanka ah Madaxbanaanideeda ay u qaadan doonto dagaal toos ah islamarkaana ay ka jawaabi doonto.
Dowladaha Sucuudiga,Masar,Imaaraadka iyo Baxreyn ayaa go’doomin cir,dhul iyo Bad ah ku rogay Dalka Qadar kaddib markii ay ku eedeeyeen in ay taageerto Argagixisada sidoo kalena ay faro gelin ku heyso arrimaha gudaha dalkaas.
Wasaaradda Maaliyadda Somaliland oo la wareegtay kastamkii Tukaraq
41,885 total views, 2,638 views today
41,885 total views, 2,638 views today War ka soo baxay Hay’ada Nabadsugida iyo Sirdoonka Qarank ayaa waxaa lagu sheegay in Ciidamada Amniga ay Gacanta ku dhigeen Maxkaxdii ka dambeeyasay weerarkii dadka badan ku dhinteen ee lagu qaaday […]
41,957 total views, 2,637 views today
41,957 total views, 2,637 views today Wasaaradda Arrimaha Dastuurka ee Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa maanta qabatay munaasabad lagu daahfurayay Barnaamijka Carabiyaynta Dastuurka KMG ah oo ay ka soo qeybgaleen Wasiir Ku-Xigeenka Arrimaha Dastuurka iyo Safiirka […]
41,969 total views, 2,637 views today
41,969 total views, 2,637 views today Wareegto ka soo baxay Xafiiska Madaxweynaha Dowlad-goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam(Madoobe) ayaa Maanta oo Khamiis ah waxaa lagu Magacaabay Hanti dhowraha guud ee Jubbaland Wareegtada ayaa waxaa Hanti dhowrahaGuud ee Jubbaland […]
41,993 total views, 2,637 views today
41,993 total views, 2,637 views today Kulan socday in ka badan sideed saacadood ayaa waxa uu Turkiga ku dhexmaray Mas’uuliyiin uu horkacayay Wasiirka Gaadiidka iyo Duulista Soomaaliya Maaxamed Cabdullaahi Salaad(Omaar) iyo Mas’uuliyiinta Shirkadda Favori ee Maamusha Garoonka […]
42,021 total views, 2,634 views today
42,021 total views, 2,634 views today Taliye ku xigeenka Ciidamada Booliska Dowlad Goboleedka Galmudug Col, Cabdi Jaamac Cabdulle ayaa shaaciyay in kadib baaritaano ay sameeyeen ay heleen halkii laga soo abaabulay weerarkii lagu qaaday Xarun uu Gaalkacyo […]